ထုတ်ကုန်များ > 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline (27631-29-4)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline (27631-29-4) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်ဓာတုထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာကြသည်လျှင်, အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်ကြည့်ရှုပါ။ APICMO 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline (27631-29-4) အပါအဝင်ဓာတုထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုထုတ်လုပ်မယ့်ဆေးဝါးကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အဖြစ်များသည့် Good Manufacturing Practice (CGMP) နှင့်အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်လျော။ ကျနော်တို့မသာလွန်းသငျသညျပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးပေမယ့်တစ်ဦးအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းအာမခံပါသည်။
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 259.086
IUPAC အမည် 2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
ရေဆူမှတ် 340.5 mmHg မှာ760˚c
Flash ကို Point သို့ 159.7˚c
အဘယ်သူမျှမ CAS 27631-29-4
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline (27631-29-4)
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) Synthesis လမ်းကြောင်း
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) Synonyms
Doxazisin mesilate ညစ်ညူး E ကို
Doxazosin ညစ်ညူး E ကို
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတု Properties ကို
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာ, အဲဒါကို decomposes:
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) တွက်ချက် Properties ကို
ပိုင်ရှင်က NAME ပိုင်ရှင်တန်ဖိုး
compound Canonized သည် စစ်မှန်သော
XLogP3-AA ကို 3.4
အတိအကျ Mass 257.996 g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 44.2 တစ် ^ 2
CACTVS Substructure Key ကိုလက်ဗွေ AAADccBzMAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
LqLF + tuENCpuwBtK6Cew0BMOIEABAgaCQ
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) Uses
တစ်ဦး epidermal တိုးတက်မှုနှုန်း inhibitor ဖြစ်သော Kinases ၏ပြင်ဆင်မှုစဉ်အတွင်း 2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) တစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုကြားခံဆောင်ရွက်သည်။
Terazosin (T105000) .Terazosin ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အလယ်အလတ်တစ်တုံ့ပြန်မှု hyperplasia.It လည်းသွေးတိုးရောဂါကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ဆီးသွားခြင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင့်ဆောင်ရွက်သည်။
ဒါဟာအဆိပ်အတောက်လေ့လာမှုများနှင့် Prazosin ၏စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းအခြားအခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုများ, FDA ကမှအဖြစ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး (QC) အတွက်အတိုကောက်နယူးမူးယစ်ဆေးလျှောက်လွှာပုံစံတင်ပို့ရန်များအတွက်အသုံးပြုသည်။
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4 နှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့အန္တရာယ်)
ရှိုက်လျှင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခြောက်သွေ့သို့မဟုတ်စိုစွတ်သောချောင်းဆိုးခြင်းဖြင့် symptomized စေခြင်းငှါအရာယားယံ, ရင်ဘတ်နာကျင်မှု, အသက်ရှူရင်ကြပ်, နှာခေါင်း၏မီးလောင်ရာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဲဒါကိုနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာသောအခါ၎င်းသည်အသားအရေနှင့်ချွဲအမြှေးပါးယားယံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်, အရေပြား, မီးရှို့ခံရသောသို့မဟုတ်ယားယံခြင်းနှင့်အရေပြားလာခြင်း၏ရောင်ရမ်းခြင်း, အရေပြားအက်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မျက်စိမှ splashes တစ်ချိန်ကဒါဟာပြင်းထန်တဲ့မျက်စိယားယံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မျက်စိကိုဖွင့်လှစ်ရန်၎င်း၏ symptomsarethe နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, မျက်စိတို့သည်မျက်ရည်, နာကျင်မှုများနှင့်မှုန်ဝါးသောရူပါရုံကိုရောင်ရမ်းခြင်းမျက်စိ။
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်များ
သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမဆို splash မှသင်၏မျက်စိသို့မဟုတ်မျက်နှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမျက်မှန်သို့မဟုတ်မျိုးစုံမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး။ 166 CFR အ 29 အတွက်ဥရောပနျ Standard EN1910.133 သို့မဟုတ် OSHA ရဲ့မျက်လုံးနှင့်မျက်နှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းများကဖော်ပြထားသကဲ့သို့သူတို့ကိုဝတ်ဆင်။
သင်၏လက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ impervious ဖြစ်ကြောင်းအကာအကွယ်လက်အိတ်။ သူတို့ကအရည်အသွေးမြင့်၏ဖြစ်သင့်သည်။ သင်ဓာတု permeation ကာကွယ်တားဆီးဖို့မဆိုမျက်ရည်ရှိလျှင်ကြည့်ဖို့အသုံးမပြုခင်ကသူတို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းကြောင့်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အမြဲတမ်းပြင်မျက်နှာပြင်ကိုထိစရာမလိုဘဲလက်အိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကို reusing ရှေ့တော်၌သန့်ရှင်းရေး။
ပစ္စည်းဥစ္စာဓာတ်များကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ ဒါဟာသို့သော်သာမန်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများအောက်တွင်မလိုအပ်နေပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးအမျိုးအစား youundertake သင် respiration ကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အသားအရေထိတွေ့မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့အကာအကွယ်သောအဝတ်, ဆိုလိုသည်မှာ, ခါးစညျးရှေ့ဖုံး, ဖိနပ်ဝတ်ဆင်။ အမြဲတမ်းစွန့်သို့မဟုတ်နောက်တဖန်ဝတ်ထားရှေ့တော်၌သန့်ရှင်းရေး။
2. 2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှုများ
ယင်းကို Workstation အတွက်လေဝင်လေထွက်လုံလောက်သောကြောင်းအာမခံပါသည်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်ချုပ်ထားနေရာများအတွက်ဒေသခံလေဝင်လေထွက်စနစ်တပ်ဆင်မှတဆင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့လုပ်နေသည့်စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းထုတ်လုပ်ဓာတ်ငွေ့ဆံ့ကူညီပေးပါမည်။
လုံခြုံမှုရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနှင့် eyewash ဘူတာမတော်တဆမှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက် On-The-ပွဲချင်းပြီးပိုးမွှားလျော့ကျစေများကိုအလုပ်၏ဘူတာရုံနီးစပ်သူဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းအဝတ်အစားမီးလောင်မှုကိုချွတ်ချပြီးနှင့်အဝတ်အစားတ္ထုများကိုချွတ်သန့်ရှင်းရေးတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
မှန်ကန်စွာလည်ပတ်နေသောဓာတုအငွေ့ကိုတစုံတရာရှိတယ်ဆိုတာသေချာနှင့်တစ်မိနစ်လျှင် 100 ခြေနိမ့်ဆုံးပျမ်းမျှမျက်နှာအလျင်ရှိသည်။
ရှိုက်ခဲ့လျှင်, သွားထိတွေ့မှုကနေသားကောင်ရသူ / သူမ၏အိပ်ပါစေ။ ထိုဒေသတွင်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေရှိပြီးသားကောင်သူ / သူမအငြိမ့်ရှူနိုငျသောအနေအထားတွင်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ အသက်ရှုမရရှိလျှင်, အောက်စီဂျင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ချက်ချင်းဆရာဝန်တစ်ဦး၏အာရုံကိုရှာကြာလော့။
စားသုံးမိ၏အမှု၌, ရေများများနှင့်အတူပါးစပ်သန့်ရှင်းရေး။ နှုတ်တော်ထွက်အမှတဆင့်တစ်ဦးသတိလစ်သားကောင်ဘာမှပေးခြင်းမကြိုးစားပါနှင့်။ ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အကြံပေးချက်ကိုရှာကြလော့။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသင့်အရေပြားရရှိသွားတဲ့ အကယ်. မည်သည့်ပိုးအဝတ်များနှင့်ဖိနပ်ချွတ်ရတဲ့နေစဉ်, ဆပ်ပြာနဲ့ running ရေနှင့်အတူချက်ချင်းချွတ်ဆေးကြောပါ။ ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသင့်မျက်မှောက်မှ splashes လြှငျ, ရေတွေအများကြီးနှင့်အတူချက်ချင်းသုတ်ခြင်း။ သင်သည်မည်သည့်အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့လုံခြုံလွယ်ကူလျှင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ 15 မိနစ်နိမ့်ဆုံးအဘို့နှစ်ခုလုံးမျက်ခမ်းအောက်မှာသုတ်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ ယားယံဆက်ရှိနေသေးပါလျှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရယူပါ။
4. 2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာ
ဒါကြောင့်အဆိပ်သင့်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်အဖြစ်အဖျော်ယမကာ, အစာကျွေးခြင်းနှင့်စားသောက်ကုန်ကနေကွာထားပါ။ မျက်စိကိုနှင့်အဆက်အသွယ်ရှောင်ကြဉ်ပါနှင့်၎င်း၏နာကျင်ကျိန်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှူရှိုက်ကြပါဘူး။ သင်သည်မည်သည့်ချိုးယူမီနှင့်အလုပ်မှာတစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာသင်၏လက်သန့်ရှင်းရေးကြောင်းသေချာပါစေ။ ယင်းကို Workstation အတွက်သင့်လျော်သောလေဝင်လေထွက်လည်းမရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ထိတွေ့မှုကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အားလုံးသင့်ရဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဝတ်ဆင်။ မဆိုစစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီသငျသညျအစာရှောငျကအရေးပေါ်တုန့်ပြန်များအတွက် 10 မီတာထက်ပိုဝေးသငျသညျကနေဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်း, spillage ပစ္စည်းကိရိယာများ, မျက်စိဘူတာရုံ, andfirst အကူအညီပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ အားလုံးကွန်တိန်နာပိုမိုလွယ်ကူဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်ကောင်းစွာ-တံဆိပ်ကပ်ဖြစ်ကြပြီးသဟဇာတတ္ထုများနှင့်အတူရောနှောထံမှသင်တို့ကာကွယ်တားဆီးဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။
5. 2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) ကိုသုံးပြီးပြီးနောက်
ပစ္စည်းဥစ္စာကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်သင်၏လက်ကိုရှင်းလင်း။ အားလုံးညစ်ညမ်းအဝတ်အစားနှင့်ဖိနပ် Remove နှင့်သူတို့ဝတ်ထားသို့မဟုတ်ပယ်မတိုင်မီချက်ချင်းသူတို့ကိုသန့်ရှင်းရေး။ ဒါဟာနှံ့နှံ့စပ်စပ်ဖြစ်နှင့်သောအဝတ်လေခတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမယိုဖိတ်နေတဲ့တုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်ဤအရပ်မှထွက်ခွာရှိပါတယ်ကြောင်းသေချာစေရန်အလုပ်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး။ စနစ်တကျအားလုံးကွန်တိန်နာများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
လူအပေါင်းတို့သည်ကွန်တိန်နာဖိတ်ရာမှကာကွယ်တားဆီးဖို့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ထားထားပါ။ အသုံးပြုမှုကိုအပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာဓာတုသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်၎င်း၏ကောင်းစွာ-label တပ်ထားသောမူရင်းကွန်တိန်နာအတွင်းဓာတုချန်ထားပါ။ လုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်နှင့်သဟဇာတတ္ထုများထဲကနေဝေးနှင့်အတူအေးမြခြောက်သွေ့၌ချထားပါ။ ဒါဟာဖြစ်ပျက်ထံမှမတော်တဆမှုတားဆီးကူညီပေးပါမည်။
7. 2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) ကိုင်တွယ်မှုနှင့်သိုလှောင်
ကောင်းသောတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှုနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာ။ တင်းကျပ်စွာတစ်ဦးသင့်လျော်သောဦးထုပ်နှင့်အတူသော့ခတ်ကွန်တိန်နာထားပါ။ ခြောက်သွေ့တဲ့ကြောင်းကိုတစ်ဦးအေးမြရာဌာန၌ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အငွေ့၏စုဆောင်းခြင်းလျှော့ချဖို့အလုပ်ခွင်ထဲမှာအလုံအလောက်လေဝင်လေထွက်လည်းမရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ဒါကြောင့်မီးလောင်လွယ်သောကွောငျ့ကွာစက်နှိုး၏သတင်းရင်းမြစ်ကနေဓာတုထားပါ။ သငျသညျလပ်ချိန်မတိုင်မီနှင့်အိမ်သာသွားရောက်ခြင်းမပြုမီသင်၏လက်သန့်ရှင်းရေးကြောင်းသေချာပါစေ။ အဘယ်သူမျှမဓာတုယိုဖိတ်ရှိပါတယ်ကြောင်းသေချာပါစေနှင့်မဆိုသူတို့ကိုထက်တောင်ဦးနှင့်ဧရိယာကိုရှင်းလင်းလျှင်။
ကွာအေးဂျင့် oxidizing ကနေဓာတုသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြပြီးခြောက်သွေ့သောအခြေအနေများအတွက်ကောင်းစွာ-တံဆိပ်ခတ်ကွန်တိန်နာနှင့်နေရာများတွင်သိမ်းဆည်းထား။ ယင်းကွန်တိန်နာတိုင်းမှာမကျွမ်းကျင်သူတွေပဲသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပုဂ္ဂိုလ်များ၏လက်၌မရကြဘူးကြောင်းအာမခံပါသည်။
8. 2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) မတော်တဆအစီအမံ
သန့်ရှင်းရေးသို့မဟုတ်ကောက်ခံရေးပစ္စည်းဥစ္စာဖိတ်နေစဉ်, မြေမှုန့်စုဆောင်းခြင်းလျှော့ချရန်လုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်ရှိကွောငျးအာမခံပါသည်။ ကအားလုံးကိုထက်တောင်များနှင့်ပယ်ဘို့အဆင်သင့်စွန့်ပစ်ခြင်းကွန်တိန်နာထဲမှာထားပါ။
မီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အောက်ပါ extinguishing အေးဂျင့်များ၏ဖြစ်စေသုံးတတ်၏
အရက်-ခံနိုင်ရည်မြှုပ်သို့မဟုတ်ရေမှုန်ရေမွှား အသုံးပြု. ပိုမိုကြီးမားသောမီးလောင်မှုငြိမ်းအေး။
လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအောက်ပါအန္တရာယ်ရှိသောထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိကြ၏ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်ဓာတ်ငွေ့, နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ် (NOX), ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO), ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် (CO2) ။
သငျသညျ, ထို့ကွောငျ့, Self-ပါရှိသောနှင့်တစ်ဦးအပြည့်အဝအကာအကွယ် impervious ဂီယာသောအသက်ရှူယန္တရားအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
9. sensitivity နှင့် reactivity
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) oxidizingagents နှင့်အတူဓါတ်ပြုပါသည်။ ဒါဟာထုတ်လုပ်ရန် decomposes; နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်, ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်။ ဒါဟာလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစွန့်ပစ်သင်တစ်ဦးအန္တရာယ် classifiedas ခဲ့ ofhas ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးချင်လျှင်ဓာတုစွန့်ပစ်မီးစက်ဆုံးဖြတ်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအစကဒေသခံပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်း ofaccording စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်သေချာသင့်ပါတယ်။
2,4-Dichloro-6,7-dimethy-quinazoline (27631-29-4) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
သငျသညျမီလီဂရမ်သို့မဟုတ်ကီလိုဂရမ်အတွက်လိုအပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ဤအရပ်၌ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှု desktoday ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးကဲဝန်ဆောင်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရ။
Chem သတင်းရပ်ကွက်များအမေရိကန်, Directories ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်, 2004-ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းစာမျက်နှာ 450
ဓာတုပစ္စည်းများ Thermophysical Properties ကိုနှင့်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်-တဲ့ Carl အယ်လ် Yaws, စာမျက်နှာ 278
2004 Chem သတင်းရပ်ကွက်များက USA အခြားတစ်နှစ်တာဒီတော့စျေးနှုန်း, Chem သတင်းရင်းမြစ်အင်တာနေရှင်နယ်, Edition ကို 45, ဓာတုသတင်းရင်းမြစ်အင်တာနေရှင်နယ် 2004, စာမျက်နှာ 450
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, 4,4-Difluorocyclohexanone, ကဏ္ဍများ 1-8 ။